रिट्ठाको दानाः दम रोगदेखि माइग्रेनसम्म ठीक पार्छ….. | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
रिट्ठाको दानाः दम रोगदेखि माइग्रेनसम्म ठीक पार्छ…..
प्रकाशित मिति २८ बैशाख २०७६, शनिबार १३:०० लेखक नेपाली जनता
रिट्ठा एक किसिमको फल हो जसलाई सुकाएर साबुन, डिटर्जेन्ट र श्याम्पू बनाउन प्रयोग गरिन्छ । रिट्ठा र त्यसको पाउडर पनि सजिलै पाइन्छ । यसको प्रयोग कपाललाई बलियो र कालो बनाउनका लागि गरिन्छ अनि यसले स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै समस्या समाधान गर्छ । माइग्रेन माइग्रेन भएपछि शिरको आधी भागमा चर्को पीडा हुन्छ । रिट्ठाको प्रयोगले पीडाबाट राहत पाउन सकिन्छ । रिट्ठाको धूलोमा अलिकति मरिच र पानी मिसाउनुस् । यो घोललाई चारपाँच थोपा नाकमा हाल्दा माइग्रेनको पीडा भाग्छ । दम दमको रोगीलाई सास लिन अप्ठ्यारो हुन्छ अनि धूलो प–यो भने पनि खोकी लाग्न थाल्छ । पाँच ग्राम रिट्ठाको धूलोमा २५० मिलिलिटर पानी मिसाएर काँढा बनाएर पिउँदा लाभ हुन्छ ।
दिनमा दुईतीनचोटि काँढा पिउँदा कफ ठीक हुन्छ र सास फेर्न सजिलो हुन्छ । दाँत दुखेको रिट्ठाका बिउलाई तावामा भुटेर त्यसबराबर फिटकिरी मिसाएर पिस्नुस् । अब यसलाई दाँतमा दल्नुस् । आराम पाउनुहुनेछ । आउँ पर्ने आउँ पर्दा दिसासँग रगत आउँछ र असाध्यै पीडा हुन्छ । यस्तो हुँदा आधा लिटर पानीमा रिट्ठाको धूलो हालेर पकाउनुस् र चिसो भएपछि आधी कप पिउनुस् । दिनदिनै यो पानी पिउँदा आउँ ठीक हुन्छ । अनियमित रजस्वला यसका लागि रिट्ठाको धूलो दुई ग्राममा अलिकति मह मिसाएर खाँदा रजस्वला नियमित हुन्छ र यसबेलामा हुने पीडाबाट राहत प्राप्त हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः के तपाईलाई थाहा छ ? मृत शरीरको नाक र कानमा किन कपास राखिन्छ – हामी अक्सर देख्छौँ कि जब कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, तब उसको नाक र कानमा कपास राखिन्छ। यस्तो किन गरिन्छ त ? के यसको पछाडी कुनै धार्मिक मान्यता तथा वैज्ञानिक तथ्य छ ? मृत शरीरको नाक र कानमा कपास राख्नुको पछाडी वैज्ञानिक तथ्य छ। वैज्ञानिक तथ्य अनुसार मृत शरीर भित्र कीटाणु छिर्नबाट रोक्नका लागि नाक र कान कपासले बन्द गरिन्छ। यस बाहेक मृत शरीरको नाकबाट एक तरल पदार्थ बग्छ जसलाई रोक्नका लागि कपासको प्रयोग गरिन्छ।
अर्को कारण धार्मिक ग्रन्थसँग जोडिएको छ। हिन्दु ग्रन्थ गरुन पुराण अनुसार मृत शरीरको खुल्ला हिस्साहरुमा सुनको टुक्रा राखिन्छ, जसलाई शरीरको नौ अंगहरुमा राखिन्छ । सुनको टुक्रा धेरै पवित्र हुन्छ, यसलाई मृत शरीरमा राख्दा देहको आत्माले शान्ति मिल्ने विश्वास गरिन्छ। तर नाक र कानको प्वाल ठुलो हुने भएकोले त्यसमा राखिएको सुनको टुक्रालाई खस्नबाट जोगाउन नाक र कानमा कपास राखिन्छ।
शिवम सिमेन्ट उद्योग नजिकै बम
हेटौंडा । हेटौंडा-१८ हटियामा रहेको शिवम् सिमेन्टको कम्पाउण्ड नजिकै बम फेला परेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार सिमेन्ट…
नक्कली भिसामा किन नेपाल आउँछन् विदेशी ?
काठमाडौं । नेपालको नक्कली भिसा सहजै बेचबिखन भइरहेको छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्ला तर वास्तविकता हो यो । नेपालले…
एयरबसको इन्जिन मर्मत ठेक्का रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन
काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एयरबस–३२० विमानको इन्जिन मर्मतको ठेक्का प्रक्रिया रद्द नगर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई…
जान्नुहोस महिलाले बढी आनन्द लिने सेक्स पोजिसन !
काठमाडौं । सेक्स संसारको सर्वोत्कृष्ट आनन्ददायक चीज हो, जसका कारण सेक्स सधैं चर्चाको शिखरमा रहन्छ । सेक्सलाई अझ आनन्दायक…
संसद् बैठक शुरु, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै (लाइभ)
काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको संयुक्त बैठक शुरु भएको छ । बैठकमा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी…
अस्पतालका उपकरण एक पैसामै उपलब्ध
काठमाडौं । एक पैसामा पनि सामान किन्न पाइन्छ ? पत्याउनै नसकिने गरी वीर अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर ट्रली, ह्विलचेयर, बिरामी…
बिहेको आश्वासन दिएर प्रेमिकाको सामूहिक बलात्कार
धराशयी बन्दै वायुसेवा निगम, ३७ अर्ब रुपैयाँ घाटा
एम्बुलेन्सको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु
गुल्मी पहिरो अपडेटः ११ जनाको मृत्य, चार बेपत्ता
हिरासतबाट भागेका दुई थुनुवा पक्राउ, एक अझै फरार
जग्गा सरकारी, दर्ता निजी, मोही वाग्मती खोलो
तिनाउको बाढीले खतरा, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
एकै वर्ष विदेश पढ्न जान्छन् ६३ हजार अस्ट्रेलिया जानेको संख्या सर्वाधिक, दोस्रोमा जापान
गुल्मीमा पहिरोले पुरिएर मृत्यु हुने ६ जनाको सनाखत
वैङ्कहरूको करोडाै लगानी डुब्दै
राहदानी विधेयक अलमलियो
मृगौला प्रत्यारोपण सबै सफल, अढाई वर्षमा ४२९ जनामा प्रत्यारोपण
आफैंले बनाएको औषधि खाएका डाक्टर ठाउँको ठाउँ ठहरै
यस्ता कर्मचारीले नपाउने भए पेन्सन 52 views
ससुरा बा ! (कथा) 43 views
वरिष्ठ लोकगायक रामप्रसाद खनाललाई “स्टार अफ दि इयर” को अवार्ड प्रदान 40 views
बुद्धचित्तसहित ४ जना पक्राउ 33 views
वैङ्कहरूको करोडाै लगानी डुब्दै 27 views
छोराले बुवा मारे, आमा गम्भीर घाइते 26 views
जीएमले घूस मागेको भिडियो अख्तियारमा 19 views
भारतले पठायो चन्द्रमामा रकेट 14 views
आफैंले बनाएको औषधि खाएका डाक्टर ठाउँको ठाउँ ठहरै 14 views
औषधि पसलमा ‘अवैध विक्रेता’, औषधिको नाम थाहा छ, फार्मेसी पढेका हैनन् 13 views
नदीमा डुबेर एकको मृत्यु
सगरमाथाको फोहर सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लगियो
धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध राप्रपाको प्रदर्शन
बम डिस्पोज गर्ने क्रममा पोखरामा १ सैनिक घाइते
Designer / Reporter